मनिषा कोइरालालाई नेपाल र लिपुलेकबारे सुषमा स्वराजका श्रीमानको यस्तो जवाफ – Online Nepal
May 21, 2020 597
एजेन्सी : भारत र नेपाल सम्बन्धबारे बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराललाको ट्वी’टमा लगातार वि’वाद बढ्दो छ । अब भारतकी दिवंगत विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजका श्रीमान् स्वराज कौशलले उनको ट्वीटको जवाफमा थुप्रै ट्वीट गरेका छन् ।स्वराज कौशलले लेखेका छन्, ‘म तपाईंसँग बहस गर्न सक्दिनँ मेरी छोरी, मनिषा कोइराला । मैले तपाईंलाई सधैं आफ्नै छोरी मानेको छु ।
जब तपाईंले हामीलाई १९४२– अ लभ स्टोरीको प्रिमियरमा आमन्त्रित गर्नु भएको थियो, तब म पूरा फिल्म हेर्नका लागि बस्न सकिनँ तर सुषमाले पूरा फिल्म हेरिन् । त्यति बेला बाँसुरी तपाईंको काखमा बसेकी थिइन् । ’ ‘यो २७ वर्ष अघिको मात्रै कुरा हो । सन् १९७७ र त्यसपछि तपाईं साउथ एक्समा बस्न थाल्नुभएको थियो । तपाईं साकेतको एपीजे स्कूलमा पढ्नुहुन्थ्यो ।
तपाईंका पिता प्रकाश कोइराला मेरा भाइजस्ता हुन् र आमा सुषमा कोइराला मेरी भाउजु र साथी हुन् । हामीसँग साथमा मुस्किल समय देखेका छौं,’ उनी थप्छन् । ‘जुन दिन एम्समा तपाईंका हजुरबुवा बीपी कोइरालालाई क्यान्सर भएको थाहा भयो म उनीसँगै थिएँ । मलाई थाहा छ, बीपीले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘यो क्यान्सरको एड्भान्स स्टेज हो र म बाँच्ने समय भनेको ६ महिना हो ।’
म त्यतिबेला दुःखी थिएँ तर मैले उनको अनुहारमा निराशाको कुनै भाव देखिनँ,’ उनले भने । ‘म तपाईंको परिवारको गौरवशाली परम्परासँग परिचित छु । तपाईंका हजुरबुवा बीपी कोइराला र उनका दुबै भाइ अर्थात् सबै तीन दाजु भाइ नेपालका प्रधानमन्त्री बने । तपाईंकी फूपू शैलजा आचार्य पनि नेपालकी उप–प्रधानमन्त्री थिइन् ।’ ‘मलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईंको परिवारले कति संघर्ष गरेको छ ।
तपाईंका हजुरबुवा बीपी कोइराला १८ वर्षसम्म जे’लमा थिए । उनको ज्यान यसकारण बच्यो किनभने हिन्दू राष्ट्र नेपालमा एक ब्राह्मणलाई फाँसी दिन पाइँदैनथ्यो । तपाईंकी फूपू (बीपी कोइरालाकी छोरी) ले पनि जेलमा आठ वर्ष बिताइन् ।’ ‘र अब म तपाईंका पिता प्रकाश कोइरालाबारे बताउन चाहन्छु । उनी नेपाली कांग्रेसको संघर्षमा उनको समर्थक थिए । म सबैबारे सोच्छु ।
जेपी, लोहिया, चन्द्रशेखर जी, जर्ज फर्नान्डिस । सन् १९७३ मा म पनि थुप्रै हप्ताका लागि नेपालमा थिएँ र महलभित्रको आँगन पुगेको थिएँ।’ ‘हामी लोकतन्त्रका लागि तपाईंहरुको संघर्षमा तपाईंको साथमा थियौं । त्यहाँ भारत वा भारतीयजस्तो केही पनि थिएन । एकपटक जब तपाईंको राजासँग सम्झौता भयो, हामीलाई केही पनि चाहिएको थिएन ।
जब हामीलाई एक सांसदको रुपमा तपाईंको विचार बारे थाहा भयो, म दुःखी भएँ, तर त्यति बेला मैले सोचेँ कि त्यो नेपाली राजनीतिका लागि अनिवार्य थियो ।’ ‘भारतीयलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यति बेला दुनियाँको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रलाई तहस नहस पार्ने षड्यन्त्र चलिरहेको थियो । षड्यन्त्र गर्नेहरु माओवादीसँग मिलेका थिए । उनीहरुले एकमात्र हिन्दु राष्ट्र तहसनहस पारे, उनीहरुको उद्देश्य पूरा भइसकेको थियो ।’
‘यसको नतिजा यो भयो कि कम्युनिष्टले चीनलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न सुरु गरे । वा यस्तो भनौं कि चीनले कम्युनिष्टलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न सुरु गरे । परिणामस्वरुप पारम्परिक रुपमा हिमालयसम्म जाने भारत–चीन सीमा अब बिरगञ्जसम्म छ ।’ ‘भारतलाई नेपालसँग असन्तुष्टि हुनसक्छ वा नेपाल र भारतबीच गम्भीर विवाद हुनसक्छ । यो नेपाल र भारतबीचको कुरा हो । तपाईंले चीनलाई बीचमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ ? यो हाम्रो लागि खराब हो ।
र यो नेपालको लागि पनि राम्रो होइन ।’ ‘जब तपाईंले चीनलाई बीचमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईंले हामीसँगको हज्जारौं वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई समाप्त गरिरहनुभएको छ। तपाईंले हाम्रो पारस्परिक सम्बन्धलाई समाप्त गरिरहनुभएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक सर्वभौम देशको रुपमा तपाईंले आफ्नो देशको स्थितीलाई थप तल झारिरहनु भएको छ।’ मनिषा कोइरालाले विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको एक ट्वीट रिट्वीट गरेपछि उनीविरुद्ध भारतीय मिडियालगायत विभिन्न व्यक्तित्व खनिएका छन्।स्रोतःबीबीसी
Prevटेकु अस्पतालबाट ४ जना को’रोना संक्रमित निको भएर फर्किए, डिस्चार्ज हुनेको संख्या ४९ पुग्यो
Nextअब देखि भारतको होइन नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मात्र तरकारी बजारमा बेच्न पाउने !
आज मातातीर्थ औंसी : अपाङ्गता भएका छोरालाई आमाको माया…